अनुहार चम्किलो र सुन्दर बनाउने ? यो हो उपयोगी घरेलु क्रिम !
छालाको रंगरोगन निखार्न र सुन्दर देखिन दहीको प्रयोग कहिल्यै गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने अब गर्नुस् । दही पोषणका लागि जति उपयोगी छ, त्यत्ति नै छालाको रंगरोगन सुन्दर बनाउन पनि । हालै गरिएको एक अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार छालासँग जोडिएका हरेक समस्याका लागि दही बहुतै उपयोगी हुन्छ ।
यसले दाग, धब्बा हटाउनुका साथै छालाको चमक फिर्ता ल्याउँछ । यदि तपाईंले दहीमा अरु कुनै दोस्रो तत्व मिसाउनुभयो भने त यो झनै उपयोगी हुन्छ । चाहनुभयो भने दहीमा कागतीको रस, टमाटरको रस जस्ता नेचुरल चिज मिसाउन सक्नुहुन्छ । सही परिणाम पाउनका लागि हप्तामा दुई पटक दहीको प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
१. कतिपयको मुहारमा पटक-पटक डण्डीफोरको समस्या देखिने गरेको छ । यसलाई ठिक गर्नका लागि पनि दहीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पहिले अनुहारलाई राम्ररी पानीले सफा गर्नुस् । त्यसपछि राम्रोसँग पुच्छ्नुस् । जब पानी पूरा सुक्छ, तब प्रभावित भागमा दही लगाउनुस् । यसलाई करिब १५ मिनेट त्यही रहन दिनुस् अनि पखाल्नुस् ।
२. यदि तपाईंको छाला निकै सुख्खा छ भने पानीको कमी मुख्य कारण हुनसक्छ । पहिलो उपाय त प्रसस्त पानी पिउन थाल्नुस् । यसका साथै अनुहारमा दहीको लेप लगाउनुस् । यसमा थोरै मह मिसाएर लगाउँदा थप प्रभावकारि हुन्छ ।
३. दहीको फेस प्याक लगाउन थालेपछि अनुहारमा चमक देखिन थाल्छ । दहीले डेड स्किन सफा हुन्छ, साथै अनुहारमा निखार पनि आउँछ । दहीलाई हातमा लिएर १५ मिनेटसम्म अनुहारमा मसाज गर्नुस् । त्यसपछि केही समय त्यहीँ रहन दिनुस् । त्यसपछि मनतातो पानीले अनुहार सफा गर्नुस् ।
४. यदि तपाईंको अनुहारमा एकदमै धेरै दाग-धब्बा छ भने दहीको प्रयोग तपाई‌का लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा रहेको प्रोटीनले छालामा चमक ल्याउन मद्दत गर्छ । दहीको प्याक अनुहारमा लगाएर केहिबेर रहनदिनुस्, ताकि छालाले पोषक तत्व सोस्न पाओस् । यसबाट अनुहारको दागधब्बा हटेर जान्छ ।
५. निद्राको कमीका कारण आँखाको तल कालो घेरा (डार्क सर्कल) देखिने गर्छ । गलत खानपान पनि यसको कारण हुनसक्छ । यदि तपाईंको अनुहारमा पनि डार्क सर्कल देखिएको छ भने दहीको प्याक लगाउन सक्नुहुन्छ ।
६३ जिल्लामा फैलियो स्क्रब टाइफस, ३ जनाको निधन
गण्डकी प्रदेश, प्रदेश, स्वास्थ्य
बाग्लुङमा ६ जनामा डेंगुको संक्रमण
ई-चुरोट उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका
डेङ्गुको उच्च जोखिममा भक्तपुर
टेकु अस्पतालमा परीक्षण गराउनेमध्ये ७० प्रतिशतमा डेंगु पोजेटिभ
डेंगु आतंक : ५६ जिल्लामा फैलियो, ६ को मृत्यु
डेङ्गुविरुद्ध ‘सर्च एण्ड डिस्ट्र्वाई’ अभियान सुरु
देशैभरी डेंगुको संक्रमण, २४ सयभन्दा बढी प्रभावित
हामीले खान जानेका छौं ? कसरी खाने ?
पुरुषहरुले यी ७ घरेलु तरिकाले अनुहार चम्किलो बनाउन सक्छन् (प्रयोग विधिसहित)
जवान बनिरहन मन छ, यी पाँच खानेकुराबाट टाढै रहनुहोस्
गर्भवती भएको बेला आलु खानु यसकारण हानिकारक
हृदयघातबाट बचाउँछ बेसारले
जीवनको उत्तरार्धतिर छु । ८८ वर्ष पुगेँ । यो क्षणमा ओछ्यानमा एक्लै बसिरहँदा इतिहासका चित्रहरु मानसपटलमा घुमिरहन्छन् । म २००६...
लोकतन्त्रमा जन्मिएका छोटे राजाहरुको कथा
मेरो छिमेकमा एउटाको नाम दिलबहादुर छ, तर ऊ दैनिक रक्सी पिएर आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई सताउने काम गर्छ । म कहिलेकाहीं उनको...
काठमाडौं, ४ असोज । नेपालबाट मनसुन अन्त्य हुने समय नजिकिँदै गर्दा मनसुनको समय भने अझै लम्बिने सम्भावना देखिएको छ । मनसुनी न्यून...
काठमाडौँ, ४ असोज । गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर शनिबार बिहान चार रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–१...
श्रीमान्को हत्या अभियोगमा श्रीमतीसहित दुई पक्राउ
परासी, ४ असोज । श्रीमान्को हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमतीसहित दुई जनालाई पश्चिम नवलपरासी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बिगत...
मौसम खबरः देशैभर मौसम बदली रहने पूर्वानुमान
काठमाडौं, ४ असोज । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबार देशभर मौसम बदली रहने जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार शनिबार दिउँसो देशभरी...
कास्कीबाट निर्वाचनमा उठ्नु भनेको म फेरि पराजित हुनु होः गौतम
काठमाडौं, ४ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आफू कास्कीबाट उपनिर्वाचनमा चुनाव नलड्ने...
चितवन, ४ असोज । भरतपुर महानगरपालिका-१६ का वडा अध्यक्ष चतुरमान गुरुङको निधन भएको छ। गुरुङको उपचारकै क्रममा शनिबार बिहान निधन...